Tom Howard - Ronga yako chirongwa musangano pamwe negweta redu re cannabis
Nei Kambani Yako Cannabis Inoda Gweta Yakanaka
Nei yako mbanje kana yekambani kambani ichida gweta re cannabis?
Seti yechipiri yemaziso pane zvako zvinopa izvo zvinopa maitiro akajeka anogona kuita kuti kambani ibudirire. Semuenzaniso, Warren Buffett akasangana negweta rakatumidzwa Charlie Munger muna 1959 uye akada maonero ake zvakanyanya zvekuti yakamugonesa kuti asiye tsika yemutemo uye abatane naye kuBerkshire Hathaway. Magweta eCannabis ane varidzi uye anoshanda mabhizinesi muindasitiri uye ane ruzivo rwakadzama nezvengozi dzarwo uye maitiro zvinogona kubatsira bhizinesi rako kuwana mukana wekukwikwidza uye kuderedza njodzi yekushanda.
Isu tiri kuenda kuvhara mashanu akakosha mabhenefiti akapihwa neku hire hofisi yegweta rako idzva cannabis bhizinesi. Makambani anokopa magweta kuti abatsire bhizinesi ravo nezvose zvinhu. Heano mashanu ezve zvinobatsira zvinobatsira izvo cannabis indasitiri mumiriri inogona kuunza kuchikwata chako:
Kuziva kweComplex Kushandisa uye Licensure nzira
Kunzwisisa Kubatana neFederal uye State Laws
Kunzwisisa Bhizinesi Zvibvumirano Zvekushandisa
Yakapfuura Maindasitiri Zvakaitika uye Ruzivo
Kugadzirisa Njodzi iyo Cannabis Bhizinesi Inosangana
Isu tichazokurukura izvi zvishanu zvakanaka pakubhadhara iyo chaiyo cannabis gweta rebhizinesi rako.
Bvunza a mbanje kana hemp Gweta nezvebhizimusi rako re cannabis.
Cannabis iri kukura zvakatsiga mukushandiswa uye mukurumbira pasi rose. Izvo zvaimbofungidzirwa sebwe zvino zvave kuwana mukurumbira, kuzivikanwa, uye hunyanzvi mumatunhu mazhinji eUS neWashington, DC inyore zviri pamutemo kurima, kutora, uye kushandiswa kwembanje. Nepo hemp iri pamutemo izere mushure mekubviswa muDhara rakadzorwa Zvinhu Nyamavhuvhu purazi Bill.
Sezvatinotaura, zvinopfuura makumi matatu makumi matatu emakore muU.S. zvakanyoreswa mvumo yerimwe mbanje senge iri yechokwadi uye inoshanda nzira yekurapa.
Kunyangwe ruzhinji rwevanhu rwachinja maitiro avo kune mbanje, kutanga bhizinesi re cannabis uye kubudirira kumhanya, ibasa rekukwira rinotarisa kusiyana kwemitemo yenyika nemubatanidzwa.
Kana iwe uri mushambadzi anoda bhizinesi nehushingi hwekupinda mumusika uyu uri kukura, zvinokurudzirwa kuti utore nyanzvi ye cannabis Gweta. Chinangwa chikuru cheizvi ndechokuziva kuti bhizinesi rako rinoenderana nemirau yose inoshanda mudunhu rako.
Nhasi, tichaongorora mamwe mabhenefiti ekushandisa basa gweta we cannabis kana tasvika pakutengesa kwe cannabis, ingave hemp, yemishonga, kana yekuvaraidza mbanje.
1. Complex Zvinodiwa & Yakakwira Mitengo Kupinda Cannabis Indasitiri
Nyika yega yega ine mitemo yakasiyana-siyana inofukidza kuiswa uye kutungamira kwebhizinesi rembanje. Nyika zhinji dzakatema mirau yakaoma pane huwandu hwemabhizinesi e cannabis anogona kuiswa panguva yakapihwa.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti dzimwe nyika dzinongopa marezenisi panguva yewindo rakamanikana kwazvo rekushandisa nemitengo yakanyanya uye kukwikwidza kwakanyanya kwemalayisensi.
Kazhinji kazhinji kwete, vanyoreri vanosungirwa kubhadhara mari yakakwira yekubhadhara nechinangwa chekuburitsa purofiti dzakakosha kumatunhu enesi.
Muenzaniso wakanakisa ndeyeConnecticut, iyo inobhadharisa chikwereti chemadhora makumi maviri nemashanu emadhora ekubhadhara mari yekutsvaga kunevanenge vachitsvaga rezinesi rebhizinesi ravo rembanje. Uine iyi yakakwira mari mupfungwa, gweta re cannabis richakubatsira iwe kunzwisisa kuti ungasangana sei zvese zvekudzora uye zvekushandisa zvinodiwa kuti ubvise zvakanyanyisa mari dzemitengo.
2.Cannabis Attorneys Nzwisisa Federal & State Laws
Vamwe vangangove-vari ve cannabis mabhizimusi vane nzwisiso yepamutemo yemari mbanje mune yavo nyika uye vanoedza kuvanamatira. Nekudaro, nekuda kwechikonzero chimwe chete kana zviviri, hurumende yemubatanidzwa ingangofunga bhizinesi ravo zvisiri pamutemo voregedza rezinesi ravo.
Gweta rinokosha re cannabis rinokubatsira kunzwisisa mutemo yemubatanidzwa uye yenyika kuitira kuti iwe ugone kumira mukana uri nani wekubudirira kwenguva refu mune ino indasitiri inowana mari.
Kuve negweta rwe cannabis paneboard kunoratidza kunobatsira mukupa simba rako rekutanga. Kuona zvigadzirwa kana masevhisi aunoshuvira kupa zvakakosha kusvika pakuvamba bhizinesi rinoenda.
Mabhizinesi eMarijuana akaiswa muzvikamu zvitatu zvakasiyana, uye boka rega rega rinosimudzira zviyero zvakasiyana uye nemirairo.
Gweta rine ruzivo richakubatsira kuti unzwisise chikamu chaicho chinowira bhizinesi rako rembanje. Iyo yakacheneswa mbanje bhizinesi mapoka ndeanotevera:
(i) Kurima - Kurimwa kweManjejuana kunodzorwa zvakanyanya nenyika dzakasiyana kuvimbisa chigadzirwa chemhando yepamusoro, chakachengeteka, uye chinoshanda. Kukura mbesa mbanje dzinoda dura rakakura uye kuzvipira kwakasimba. Gweta rako rinokubatsira kuti utange mubhizinesi rino kuti uve nechokwadi chekurarama kwakanaka.
(ii) Kufuridzirwa - Mabhizinesi mazhinji ari kukurumidza kuvamba mabhizinesi ari kubata nekutengesa tinctures uye cannabis-infured edibles. Iyi inoshamisa bandwagon inokurudzirwa neakawedzera zvidzidzo zvesainzi zvinoti izvo zvakanaka zvembanje pakurapa kwemishonga. Nhamba yakakosha yemitemo yakaverengerwa mumatunhu akasiyana siyana kutonga zvinosanganiswa, kunyora uye kwakakodzera mirayiridzo yekushandira kune izvi zvigadzirwa.
(iii) Retail - Mabhizinesi eMarijuana akaiswa pasi peboka rezvitoro zvinotengesa zvinosanganisira zvekuvaraidza uye zvekurapwa. Kazhinji, aya masanganiswa anotengesa zvigadzirwa zvavo kuvanhu vane mvumo nevarwere vane makore ari pamusoro pemakore makumi maviri nemasere. Mari yekutanga yekumisa zvitoro zvekutengesa ndiyo inonyanya kudhura pane zvese, asi kazhinji inogadzira purofiti yakakura kudarika mamwe marudzi ese emabhizinesi etsiyo.
3.Cannabis Magweta Anonzwisisa Kubatana
Gweta rinonyatsotaura nemitemo yehurumende uye yenyika mbanje rinokubatsira kuona mamiriro chaiwo anoshanda kune mamwe mamiriro eiyo bhizinesi rako rembanje. Kunzwisisa zvinodikanwa zvekushandisa, kupa marezinesi uye kupa mari bhizinesi rako rechikamu chinhu chakakosha pakuvaka nekurera kambani yepamutemo mbanje.
Vamwe mbanje kana hemp mabhizimusi vanoedza kufamba aya mahunyanzvi uye vanongopedzisira varasikirwa nekwavo mari.
Maitiro anosanganisira kunyorera rezinesi rebhizinesi uye kutsvaga mari anogona kusiyana zvichienderana nenzvimbo yaunogara. Mari yekunyorera haidzoreke mune mamwe matunhu uye kazhinji inodhura zviuru zvemadhora pasina zvishoma zvekubvuma garandi. Kuita cheki yekumashure kungave kuri madikanwa mune mamwe mamiriro kuti ubvise vanotongwa vasina nhoroondo vane nhoroondo inotenderera mumhirizhonga kana mhosva dzine chekuita nezvinodhaka.
Zvakare, nyika zhinji dzine mitemo inodzikamisa huwandu hwemabhizimusi echiputa ayo anogona kuiswa munzvimbo yakapihwa. Izvi zvakapa kuti inflated ada uye makwikwi awedzere. Dzimwe nyika dzinotoenda padanho rekubvunza nezve yako zviwanikwa zvemari kuti uone kana iwe uine mari yemisipha yekubhadhara mari dzakadai sekurenda uye zvinoshandiswa.
MuI Illinois, semuenzaniso, iyo nyika ingangoda mabhizimusi ehupfu mbanje kuti ave nehupfumi hwemari isingasviki hafu yemiriyoni emadhora kumisa bhizinesi. Nyika inogona zvakare kuda kuona matanho akachengetedzeka akashandiswa nemuridzi webhizinesi kuti ave nechokwadi chekuti mbanje inogadzirwa nemishonga isingagumi pamusika mutema - zvingaitike netsaona kana nemaune.
Kunze kwemutemo wenyika, hurumende dzenzvimbo nemaguta vanogona kunge vaine nzira yavo yekugadzirisa bhizinesi rembanje. Dzimwe hurumende dzepano dzinotarisa kumberi kwevanabhizinesi vembanje nevashandi vavo seyambiro yekutanga kunyorera rezenisi.
Tichifunga nezvemitengo yakakwira iyi, kubhadhara gweta re cannabis kuti ikubatsire kufamba izvi zvinoratidzika kunge zvine hunyanzvi ruzivo runogona kunge rwuri pfungwa yepamusoro usati wafambira mberi. Kukundikana kutevedzera zvinodiwa kunogona kutungamira kune faindi, kudzoserwa rezinesi, uye mhosva yemhosva pakati pezvimwe zvirango.
4. Kuwana Yako Cannabis Bhizinesi Kunze Ground
Kutanga nekuchengetedza bhizinesi ye cannabis inogona kuve basa rakaoma. Kunze kwezvipingamupinyi zvakajairika sekufambiswa kwemari, kushambadzira, hukama hwevatengi, uye kukura, bhizinesi re cannabis rinofanirwa kuterera nemitemo yese nemirairo - kana gadzirira kutarisana nemhedzisiro. Iine iyo chaiyo cannabis Gweta parutivi rwako, bhizinesi rako rinogona kuvakwa mune chaiyo hwaro hwaro kuti rive nechokwadi chekuwedzera uye kuwedzera.
Iyo yakanaka cannabis gweta ichakubatsira iwe ne cannabis bhizinesi kugadzirwa & kushanda, zonging & kubvumidza, uye kutevedzera emuno & nyika marezinesi.
Pasina gweta, zviri nyore kuti uzviwane uchifamba mumutsara mutete usingazvizive nekuda kwekuchinja kwakawanda kwemitemo inodzora bhizinesi rembanje. Mhosva zhinji dzekupara mhosva dzinogona kukurova mubhizimusi rembanje kusanganisira nguva yejeri, kutyisidzirwa kwekuvharwa kwebhizinesi, uye faindi dzinobhadharisa pamwe nemimwe mari.
Gweta rorudyi re cannabis haringokuudzivirira kubva kune izvi zvipomerwa asi zvakare kuchengetedza mukurumbira webhizimusi rako. Bhizinesi rega rega rinoda kushanda mukati memutemo kuitira kuti mubato urambe uchishanda. Mukupedzisira, bhizinesi rako rinofanirwa kushanda rakabudirira pasina kuwedzera kusagadzikana kwekugadzirisa nyaya dzemutemo.
5. Kuderedza Marijuana kana Hemp Bhizinesi Njodzi
Kubira muchengeti we cannabis inzira huru yekudzora njodzi yako bhizinesi raungatarisana nayo. Kune rimwe divi, mbanje inoramba iri chinhu chisiri pamutemo pasi pemutemo wehurumende, uye hapana kusiana kunoitirwa nyika dzakaratidza zviri pamutemo kushandiswa kwayo pakurapa kana kwekunakidzwa. Ukuwo, vanhu vane mabhizinesi anoenderana nemitemo yenyika kazhinji havana njodzi yekusungwa kana kutongwa nevakuru vehurumende.
Nekuda kweizvozvo, vese varidzi vebhizinesi rembanje vanorayirwa kuti vatevedze zvakadzama zviga zvehurumende mukuda kupomhodza mikana yekupomerwa mhosva uye kurasikirwa kwekudyara. Hurumende yemubatanidzwa inogara yakatarisa kumabhizinesi asina kudzivirirwa pasi pemitemo yehurumende mbanje kuti isungwe.
Iyo iri kutarisa kupomhodza avo vanopara mhosva dzakadai sekuparadzirwa kwembanje nemisangano yetsotsi yakarongeka, kutyaira kwakapindwa muropa, kugovera mbanje kuvana vadiki, uye zvimwe zviitiko zvinosanganisira kuve nemutemo zvisiri pamutemo.
Mune nyanzvi ye cannabis Gweta pane, ungazorora uine chokwadi chekuti bhizinesi rako rakagadzirirwa nenzira inogona kuderedza zvakanyanya njodzi yekushushwa kwemubatanidzwa.
Gweta rinokwanisa kurongedza bhizinesi rako richiteerana nemitemo yese yenyika kuti ridzivise kudzoserwa kwezinesi rebhizinesi uye faindi dzinoperekedzana nazvo. Zvakare, gweta re cannabis richakwanisa kuchengetedza bhizinesi rako rakachengetedzwa uye kusvika parinhasi nekunyatso tarisa mitemo yematare uye shanduko mugwaro.
Mubhizimusi rembanje, chikanganiso chimwe chete chinogona kukuisa mudare remubatanidzwa uye kudzima mari yako. Imwe yezvikanganiso zvakadaro inosanganisira kuripira vashandi. Kana iwe uchikarira kurovera vashandi vatsva, gweta re cannabis richakubatsira iwe nemirairo yemhosva uye inishuwarenzi.
Pfungwa dzekupedzisira pane dzeCannabis Attorneys
Mabhizinesi ane chekuita nekurima kana kutengesa mbanje anomisa njodzi yakakura. Nechikonzero ichocho, zviri mune yako zvakanakira kufunga nezvekuhaya gweta we cannabis kune rako bhizinesi.
Gweta re cannabis haingobatsiri kugadzirisa njodzi yemari inowanikwa kune bhizinesi rembanje asi zvakare inova nechokwadi chekuti bhizinesi riripo uye marezinesi ekunyorera ari mugwara.
Tichipa yakakwira mutengo wekutangisa, kuomarara kwemirairo inosanganisirwa uye njodzi yekumhan'ara kwemubatanidzwa, gweta rinonzwika sekubhadhara zvine musoro. Kuedza kududzira iyo cannabis mitemo uri wega kunogona kupedza nguva uye kuvhiringidza.
Bata wegweta we cannabis kukurukura zvaunogona kusarudza uye kuchengetedza hurefu hwebhizimusi rako. Edu varidzi vemabhizimusi sewe.